कैलाली टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस मा अध्ययनरत विपशा ले गरीन आ’त्मह’त्या ! रहस्य थाहा पाउदा उड्यो सबैको होस् । - हाम्रो देश
कैलाली टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस मा अध्ययनरत विपशा ले गरीन आ’त्मह’त्या ! रहस्य थाहा पाउदा उड्यो सबैको होस् ।
कैलाली – कैलाली टिकापुर नगरपालिका निवासी विशाखा विष्ट ले गए राति आ’त्म ह’त्या गरेकी छन् । आ’त्म ह’त्या को खास कारण भने अहीले खुलिसकेको छैन । हाल उनी टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर मा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिन ।